NY ASA FANOMPOANA – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 septembre 25, 2015 Laisser un commentaire sur NY ASA FANOMPOANA
« Fa miharia harena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy kalalao sy harafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra. » Matio 6:20
***Zavatra iray lehibe tsy azo adinoina ny resaka momba ny talenta omen’Andriamanitra ny olombelona ao amin’ny Soratra Masina. Ny amin’ ilay handeha an-tanilavitra ka nizara talenta tamin’ny mpanompo tsirairay ary rehefa tonga izy dia nanontany ny amin’ny nanaovan’ny mpanompo izany talenta izany.
***Raha ity teny ao amin’ny Matio 6:20 dia miresaka harena izy, sy ny fihariana harena any an-danitra. Manana safidy tokoa ny olombelona, na ny mpanompo ny hamafy araka ny nofo, na ny hamafy araka ny Fanahy. Fa izay mamafy ho an’ny nofo dia hijinja fahasimbana avy amin’ny nofo. Raha ny zanaka nateraky ny rano sy ny Fanahy dia tsy tokony hamafy araka ny nofo, fa ny Fanahy tsy hitarika azy mihintsy hamafy araka ny nofo, ny firaisany amin’Ilay foto-boaloboka no mahatonga azy hamoa, ary hamoa araka ny Fanahy, fa hoy tokoa ilay foto-boaloboka hoe izay miray Amiko dia hamoha be izy, ho toy ny hazo ambolena eo amoron’ny rano velona izy, izay mamoa amin’ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra ataony lavorary avokoa. Ny fahasimbana resahina ny amin’ny famafazana araka ny fahasimbana mandrakizay izay noresahin’ilay mpanakarena may tany amin’ny helo ary niangavy mba hanirahana hisy hiteny ny rahalahiny ety antany fandrao hanjo azy ireo koa ny fijaliana nanjo ity mpanakarena ity. Ety amin’izao tontolo izao tokoa no hahazoantsika mampiasa ny talenta izay nomena antsika ho adidy ny hampitombo azy, koa raha nentintsika tamin’ny filan’ny nofo ihany tahaka io mpanankarena io, izay nanararaotra loatra ny ara-nofo ka tsy nahita akory ilay mahantra napetraka teo ambavahadiny, izay tokony mba nampiasany ny talenta izay nomena azy dia ny vola aman-karena. Tsy ny harena no ratsy, fa tokony ho tsarovana fa avy amin’Andriamanitra izany, ary talenta nomen’Andriamanitra ka tsy halevina (mandevin-talenta) fa ampiasaina hitiavana an’Andriamanitra ary hitiavana ny namana. Tsy ho variana amin’ny nofo fa entina hamonjena Fanahy, na entina hanasoavana ny mpiara-belona koa.
*** Izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’andriamanitra. Raha tarihin’ny Fanahy isika dia tsy hamafy araka ny nofo, fa ny Fanahy hampitandrina antsika hoe: ratsy io!!!
Koa raha mandinika ny tenantsika ary isika dia aoka ny Fanahy no hitarika antsika ny amin’izany fandinihintena izany, satria ny Fanahy ihany no mbola mahay mampahatsihahy ny fahotana, ary ny Fanahy koa no mbola mifona ho antsika amin’ny fitarainana tsy voatonontsika. Raha tany amin’ny ratsy ary no nanolorantsika ny tenantsika na ny asantsika dia handeha isika hifona amin’ny anaran’i Jesosy Kristy, ka handeha hamafy araka ny Fanahy kosa izao!
Publié parfilazantsaramada septembre 25, 2015 Publié dansUncategorized